Ukuba Nezidakamizwa, Ukushushumbiswa, kanye Nezokuthutha | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Ukuxhashazwa Kwezidakamizwa, Ukushushumbisa Nezokuhamba
Ubufakazi Ezimweni Zezidakamizwa
Uma wake wabanjwa nezidakamizwa onazo, kuhle ngaso sonke isikhathi ukwazi onke amalungelo akho. Amaphoyisa azohlola zonke izinhlobo zobufakazi ukuthola ukuthi umuntu owenze icala nokuthi lelo cala lingaba yini.
Izidakamizwa ziyingozi eyenzeka emphakathini
Amandla Ezidakamizwa Ezilawulwayo
Ukwepiwa ngokutholakala Nezidakamizwa
Kulolu hlobo lwecala, izidakamizwa zivame ukuba wukuphela kobufakazi bokuthi umshushisi namaphoyisa bazoba nabo.
Ayikho into efana nenani eliqondile elingabhekelwa ukusetshenziswa komuntu siqu. Lapho ubanjwa nenani elikhulu, amaphoyisa azocabanga ukuthi lokhu kuzoba kukhulu ngokwezidingo zakho. Ungabekwa icala lokwebiwa ngenhloso yokuhlinzeka izidakamizwa okuyinto ebaluleke kakhulu. Kepha, isimo sakho siqu sibucayi. Uma usebenzisa inani elikhulu kakhulu noma umthamo wezidakamizwa njalo, kunethuba lokuthi unamanani amakhulu kakhulu.
Amandla anezinhloso Zokuthengisela noma ama-PWITS Umuthi Okulawulwayo
Inani lezidakamizwa onazo likhona okusho ukuthi uzoshushiswa kanye namaphoyisa onenhloso yokunikeza omunye umuntu. Kepha, ubungako uqobo bungavamisile ubufakazi obanele. Abaphathi bezomthetho bangakukhokhisa 'ngokuba nezidakamizwa' uma bethola noma yiziphi izinto ezingekho emthethweni ku-Hashish, LSD, Heroin, Pethidine, Remifentanil, Sufentanil, Marijuana, Methamphetamine, Spice noma K2, ecstasy, Cocaine, njll.
Amaphoyisa azohlola ikhaya laKho noma imoto
Amaphoyisa azohlola ikhaya lakho noma ezinye izinto eze nezidakamizwa. Uma izinto ezihambisana nokuhlinzekwa kwezidakamizwa nazo zitholakala, kungakhombisa ukuthi unezinhlelo zokunikeza noma ukuthengisa izidakamizwa. Izinto ezinjengalezi zifaka izikhwama zokuthengiselana ngazinye, isikali, uhlu lwamakhasimende, ifilimu yokunamathela, ukheshi, nemiyalezo ekhombisa ukuthengiselana.
Amaphoyisa angahle ahlole izigxivizo zeminwe ekufakweni kwale mishanguzo, ikakhulukazi lapho ufuna ukuthi le mithi akuyona eyakho. Ngisho noma ubanjwa nesidakamizwa esincane nje, izitatimende zakho zingaba njengobufakazi. Isibonelo, lapho utshela amaphoyisa ukuthi uphathe ipilisi yokugcobisa umngani wakho, angasetshenziselwa ukuthola injongo yokunikeza.
Ukuhlinzekwa Kwezidakamizwa Ezilawulwayo
Ubungako bezidakamizwa abubalulekanga lapho ubanjiwe ngenkathi ubanikeza. Usengaboshwa ngecala noma ngabe upha inani elincane lezidakamizwa komunye umuntu.
Iziphathimandla zizofuna uhlobo oluthile lobufakazi njengokutholwa ngenhloso yokuhlinzeka. Kodwa-ke, njengoba ukutholakala kwangempela kufanele kwenzeke, bazosebenzisa ezinye izindlela zobufakazi. Kungaba ngamakhamera afihliweyo noma i-CCTV noma ezinye izikhulu ezifihliwe zingase zisezindaweni ezaziwa ukuthi zinikeza izidakamizwa. Futhi bangasebenzisa amadivaysi okulalela noma ukuphenya ukuqopha izingxoxo. Isibonelo esihle singaphakathi kwemoto yabasolwa. Ukuqoshwa okunjalo kungasebenza njengobufakazi enkantolo. Kepha, amaphoyisa awavunyelwe ukuphazamisa izingxoxo ngocingo.
Isikhulu esisebenza ngaphansi kwesembozo singase futhi senze sengathi umuntu uthenga izidakamizwa nje ukufakazela ukuthi umuntu uthengisa izidakamizwa. Isikhulu sivame ukusebenzisa imakrofoni efihlekile noma ikhamera ezorekhoda yonke into. Izikhulu eziMbuka ngokweqile azisoze zancenga noma ziphoqe umuntu ukuba enze icala. Kuzobhekwa njengokufaka odongeni, nomuntu owenze icala ngoba ihhovisi limkhuthaze ukuba enze njalo.
Obunye ubufakazi obusetshenziswe ezimeni zezidakamizwa bufaka ubufakazi befoni ephathekayo, ukukhiqizwa kwesidakamizwa esilawulwayo, kanye nokukhiqiza noma ukulima insangu.
Ungalwa Kanjani Nezindleko Zokubhema Izidakamizwa
Ukulwa namacala okubanjwa nezidakamizwa kungaba yinselele. Kepha, kungenzeka ukuthi ulwe namacala anjalo uma unommeli omuhle kakhulu ohlangothini lwakho.
Ukuba nezicelo ezahlukahlukene zedokhumenti, ukubekwa phansi, kanye nezinye izinhlobo zezicelo zenqubo kugcina kubeka phansi abashushisi. Kungcono alahle amacala noma anciphise isigwebo kunokuba aqhubeke nokuphatha umsebenzi omatasa ecaleni elincane.
Ezikhundleni eziningi, lolu hlobo lwendlela lungaholela ekuthini kukhokhiswe amacala. Lapho umshushisi enganikeli izinto ezithile ngesikhathi sokuthola, ummangalelwa angafaka isicelo sokuthi amacala axoshwe. Kwesinye isikhathi, uma le ndlela yehluleka ngenxa yokuthi umshushisi uthatha inselelo ecaleni, lingaphumelela.
Kwezinye izindawo, kungenzeka ukuthi udlule kuhlelo lokuphambukisa. Izinhlelo ezinjalo zinika amandla ukuvuselelwa kanye nenhlawulo noma ukugwetshwa. Ngemuva kokuphothula izinhlelo zokuphambukisa ngempumelelo, amacala kanye nanoma yimuphi umlando wecala ulahliwe ngokusemthethweni. Le ndlela ngokuyisisekelo idinga ukuthi umsolwa aqhubeke eqinile njengoba izinhlawulo zobugebengu zibuyela lapho umsolwa ehluleka ukuhlomula izinhlelo zabo zokwelashwa.
Ukuphonsela inselelo kanjani ubufakazi
Kwezinye izimo, kungadingeka ukuthi ulwe namacala akho ngokuhle kwawo. Kungenziwa ngokusebenzisa inselelo ukuthi butholakala kanjani ubufakazi Ungaqala ngokuzama ukukhombisa ukuthi izikhulu azinalo imbangela yokusesha noma yokumisa. Ngokuvamile, yingxenye ebuthaka kakhulu yecala umshushisi. Iziphathimandla empeleni zicela ukusesha, noma kunjalo zisebenzisa ukufaka amagama noma ithoni, okwenza kubonakale sengathi akukho ukukhetha. Yindlela ephelele yokwenqaba ukusesha inqobo nje uma ungakwenza lokho ngaphandle kokuboshelwa ukuvinjwa noma ukuvimbela ukuboshwa. Uma abaphathi besesha ngaphandle kwesizathu okungenzeka, incwadi yakho egunyaza noma imvume, ubufakazi ngeke buvumeleke enkantolo.
Obunye ubuthakathaka ukuthola ukuthi kukhona impahla eyakhayo. Kusho ukuthi izimo zingenza kubonakale sengathi izinto zisezakho, nokho akuzona ezakho. Isibonelo, kungenzeka uboleke imoto yomngane wakho ukuze uyishayele ezitolo. Ngemuva kokudonselwa ekuhlukumezeni ithrafikhi, izikhulu zithola imbangela yokusesha imoto. Izidakamizwa ezitholakele phakathi kwalokhu kusesha kungenzeka noma kungezakho. Njengoba imoto ibolekwe kuphela, kwenza kube nzima ukufakazela ukuba nezidakamizwa ngaphezu kokungabaza okungenangqondo.
Fakazela ukuthi into iyisidakamizwa
Uma ukuvikela okwedlule kungeyona inketho, ukuzivikela okulandelayo kwenza abashushisi baveze ukuthi into leyo iyisidakamizwa. Imibiko efinyelela inselelo yelebhu kanye nokuphikisana nokuhlonzwa kwento kusho ukuthi abashushisi kufanele baveze ukuthi yisidakamizwa esingaphezu kokungabaza okufanele. Lokhu kukhanda komshushisi kukhulisa imali nesikhathi esichithwa kuleli cala. Ngaphandle kwalokho, amacala obugebengu ahlehliswa kabusha kaningi. Kwenza ukuthi kube nobusuku obuhle kwabashushisi njengoba kudingeka bahlele i-lab tech ukuze babonakale ezinkantolo futhi baluhlelele usuku lochwepheshe.
Kungani ungaxhumana nommeli onolwazi ukusiza ukulwa namacala ezidakamizwa?
Ukuphatha uhlelo lwezobulungiswa e-UAE kungalimaza kakhulu. Noma ngabe uyena ohlose ukuphenywa, ubekwe icala lokungaziphathi kahle noma icala, noma ukhathazekile ukuthi ungakhokhiswa, udinga ukuzethemba ukuthi uyasebenza futhi uzimisele emizameni yakho yokuvikela amalungelo akho asemthethweni.
Uma ubhekene noma ulwa namacala okubalwa nezidakamizwa, kuwukuhlakanipha njalo ukuvumela ummeli akwenzele umsebenzi. Vele ukhethe lowo oneminyaka yokuhlangenwe nakho nobuchwepheshe kumacala ahlobene namacala anjalo. Ngale ndlela, ungaqiniseka ukuthi uzokwazi ukulwa namacala anjalo ngempumelelo.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa nokusetshenziswa komuntu siqu